China Gas Alarm Controller AEC2392b ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူများ |အက်ရှင်
%LEL၊ 10-6၊ %VOL နှင့် တန်ဖိုးအချက်ပြမှုများကို ကူးပြောင်းခြင်း။
လောင်ကျွမ်းနိုင်သောဓာတ်ငွေ့- အများဆုံး။100 (%LEL)
အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့- အများဆုံး။၉,၉၉၉ (၁၀-6)
အောက်ဆီဂျင်- အများဆုံး100 (%VOL)
အမြင့်ဆုံးဝန်ဆောင်မှုဆားကစ် 24V တစ်ခုတည်း၏ အထွက်လျှပ်စီးကြောင်း≤300mA
ကြောက်ရွံ့သောအာရုံစူးစိုက်မှု၏ ± 15%
4~20mA စံအချက်ပြမှု (ဝါယာကြိုးသုံးကြိုးစနစ်)
≤1000 မီတာ (1.5 မီလီမီတာ2)
10A/DC24V သို့မဟုတ် 10A/AC220V စွမ်းရည်ရှိသော relay contact signal ငါးခု၊
RS485 ဘတ်စ်ကား အင်တာဖေ့စ် (စံ MODBUS ပရိုတိုကော)
GQ-AEC2232bXGT-AEC2232aT၊ AEC2338, GQ-AEC2232bX-P၊AEC2338-D
● 1-4 ပွိုင့်တည်နေရာများတွင် စံ 4-20mA လက်ရှိ အချက်ပြကိရိယာများ ချိတ်ဆက်ရန် လိုအပ်မှုကို ဖြည့်ဆည်းပါ။
● အရွယ်အစားသေးငယ်သောကြောင့် ထုတ်ကုန်ကို နံရံတွင် အလွယ်တကူ တပ်ဆင်နိုင်သည်။နောက်ထပ်ပွိုင့်တည်နေရာများအတွက် သုံးစွဲသူ၏တောင်းဆိုချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် နှစ်စုံ သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ဘေးချင်းကပ်တပ်ဆင်နိုင်သည် (8၊ 12၊ 16 သို့မဟုတ် ထိုထက်ပိုသောပွိုင့်တည်နေရာများကို ကွက်လပ်မရှိပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် နားလည်နိုင်သည်)
● အချိန်နှင့်တပြေးညီ အာရုံစူးစိုက်မှုအား စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ပြသခြင်း (%LEL၊ 10-6၊ %VOL) နှင့် လောင်ကျွမ်းနိုင်သောဓာတ်ငွေ့၊ အဆိပ်သင့်ဓာတ်ငွေ့နှင့် အောက်ဆီဂျင်၏ တန်ဖိုးအချက်ပြမှုများကို ပြောင်းလဲခြင်း (မူလသည် လောင်ကျွမ်းနိုင်သော ဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေကိရိယာဖြစ်သည်။ ဆက်တင်မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ တပ်ဆင်ပြီးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြည့်ပြီးနောက်အသုံးပြုပါ);
● ဆားကစ်တစ်ခုစီသည် switching value output တစ်ခုအား ချိတ်ဆက်သည်။လိုအပ်ပါက၊ ပရိုဂရမ်းမင်းဆက်တင်ကို ချိတ်ဆက်ခြင်းအား မီနူးမှတဆင့် သိရှိနိုင်သည်။ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီတွင် host computer နှင့် ဆက်သွယ်ရန်အတွက် RS485 digital interface တစ်ခုရှိသည်။
● အမြင်အကွာအဝေးသည် ပိုဝေးပြီး အမြင်ထောင့်ပိုကျယ်သည်။အာရုံစူးစိုက်မှုတွင် ထိရောက်သောဂဏန်း ၄ လုံးပါရှိသည်။9999~0.001 ၏တိကျမှုနှင့်အတူပြသမှုကိုရရှိနိုင်ပါသည်;
● နောက်ဆုံးပေါ် 999 ထိတ်လန့်စရာမှတ်တမ်းများနှင့် 999 ပျက်ကွက်မှုမှတ်တမ်းများကို သိမ်းဆည်းပါ။
12. Standby ဘက်ထရီ
Panel အမှတ်အသားများနှင့် Mounting ညွှန်ကြားချက်များ
● ချိတ်ဆွဲပန်းကန်ပြားကို တပ်ဆင်ရန်အတွက် တပ်ဆင်ခြင်းအပေါက်များကြား အရွယ်အစားအတွက် လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ နံရံတွင် အပေါက်လေးပေါက် (သို့)6ပေါက် (အပေါက်အနက်: ≥40mm) ပြုလုပ်ပါ။
● တပ်ဆင်ခြင်းအပေါက်တစ်ခုစီတွင် ပလပ်စတစ် ချဲ့ထွင်ထားသော bolt တစ်ခုကို ထည့်ပါ။
● ချိတ်ဆွဲထားသောပန်းကန်ပြားကို နံရံပေါ်တွင် ပြင်ပြီး ချဲ့ထွင်ထားသော bolts များပေါ်တွင် ကိုယ်တိုင်ထိသောဝက်အူ (ST4.2×25);
● ထိန်းချုပ်ကိရိယာကို တပ်ဆင်ခြင်း အပြီးသတ်ရန်အတွက် ကွန်ထရိုလာ၏အောက်ခြေရှိ တွဲလောင်းအစိတ်အပိုင်းများကို အောက်ခြေဘုတ်အဖွဲ့ရှိ တည်နေရာ A တွင် ချိတ်ဆွဲပါ။
AEC2392b တွင် ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်သော ဌာနခွဲ-လိုင်းဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများသို့ ချိတ်ဆက်နိုင်သည့် ဌာနခွဲ-လိုင်းချိတ်ဆက်မှု တာမီနယ်4စုံ ပါ၀င်သည် ဆိုက်ရှိ ဓာတ်ငွေ့ပါဝင်မှုကို စောင့်ကြည့်ထိန်းချုပ်ရန် အထွက်နှုန်းများ။ဤအတောအတွင်း၊ ပြင်ပကိရိယာများ (in-site audible-visual၊ solenoid valves နှင့် fans, etc.) ကို ပြင်ပကိရိယာများပေါ်တွင် remote logical control သည် built-in programmable module5စုံဖြင့် နားလည်နိုင်သည်။ထို့အပြင်၊ မော်နီတာစနစ်နှင့်အဝေးမှဆက်သွယ်ရေးကို RS485 ဆက်သွယ်ရေးမျက်နှာပြင်မှတဆင့်နားလည်နိုင်သည်။
ယခင်- AEC2305 အသေးစား စွမ်းဆောင်ရည် ဓာတ်ငွေ့ အချက်ပြ ထိန်းချုပ်ကိရိယာ
နောက်တစ်ခု: AEC2232bX စီးရီး အဆိပ်နှင့် လောင်ကျွမ်းနိုင်သော ဓာတ်ငွေ့ ကိရိယာ
မီးလောင်နိုင်သော ဓာတ်ငွေ့ အချက်ပေး, တရုတ်ဓာတ်ငွေ့ထောက်လှမ်း, lpg ဓာတ်ငွေ့ detector, မီးလောင်လွယ်သောဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေစက်, ဓာတ်ငွေ့ detector, ပုံသေဓာတ်ငွေ့ detector,